पिपिई सेट लगाएर मितेर पुलमा यसरी कुरा गरे नेपाल र चीनका अधिकारीहरूले - Himali Patrika
पिपिई सेट लगाएर मितेर पुलमा यसरी कुरा गरे नेपाल र चीनका अधिकारीहरूले
हिमाली पत्रिका १७ बैशाख २०७८, 11:52 am
बिहीबार दिउँसो रसुवाको रसुवागढी नाकामा रहेको नेपाल-चीनबीचको मितेरी पुलमा दुबै देशका अधिकारीहरू पुगेका थिए। आपसमा कुरा गर्न पुगेका उनीहरू सामान्य लुगा लगाएर गएका थिएनन्। दुबैतिरका सबै जनाले सेतै पिपिई सेट, फेससिल्ड लगाएका थिए।
‘हामी पनि पिपिई सेट लगाएर गएका थियौं। उहाँहरू पनि त्यसरी नै आउनुभएको थियो। मितेरी पुलमा उहाँहरू आफ्नोतिर, हामी आफ्नोतिर बसेर कुरा गर्‍यौं,’ प्रजिअ ढकालले भने।
‘दोभाषेको कुरा सुन्न माइकको पनि व्यवस्था गरिएको थियो,’ ढकालले भने। दुई पक्षबीच झन्डै डेढ घन्टा कुराकानी भएको थियो।
‘कोरोना महामारीका बारे चिनियाँ पक्ष निकै संवेदनशील छ। उहाँहरूले रसुवामा कोरोनाको अवस्था के छ? नाकामा आउने चालकहरूले कोरोना खोप लगाएका छन् कि छैनन्? जस्ता कुराहरू सोध्नुभएको थियो,’ ढकालले भने,‘हामीले हाम्रो अवस्थाबारे भन्यौं।’
ढकालका अनुसार रसुवा जिल्लाभरि अहिले कोरोनाभाइरसका २१ जना सक्रिय संक्रमित छन्। २०७२ को भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि नेपाल-चीन व्यापारको मुख्यमार्ग रसुवागढी नाका भएको थियो। २०७६ बाट कोरोनाभाइरसको महामारी सुरू भएपछि अहिले उक्त नाकामा पनि व्यापार सुस्त भएको छ।